Samsung Health tonga amin'ny 6.0 tena nohavaozina: refesaho izao ny adin-tsainao | Androidsis
Ao amin'ny Galaxy S9 dia nanandrana ny kinova vaovao an'ny Samsung Health, kinova 6.0 marina izay mitondra zava-baovao roa lehibe: interface vaovao nohavaozina izay manome traikefa be mpampiasa, ary ny fahaizana mandrefy ny haavon'ny adin-tsaina; Raha mbola miantehitra amin'ny Galaxy ianao miaraka amin'ny sensor an'ny tahan'ny fo ao amin'ny Galaxy S9.
Samsung Fahasalamana lasa saika fampiharana ara-pahasalamana tsara indrindra eo amin'ny tsenan'ny fampiharana izao. Manolotra karazana asa tena ilaina be dia be izy io handrefesana ny tonontsika ara-batana isan'andro, toy ny ahafahantsika manambatra azy amin'ny karazana gadget marobe, toy ny ny Samsung Galaxy Watch vaovao. Handinika ny vaovaon'ity fampiharana ity izahay izay hametraka ny Google Fit tenany nohavaozina ihany koa andro vitsivitsy lasa izay.
1 Fampiharana ara-pahasalamana mba hahafantaranao ireo gadona isan'andro
2 Samsung Health no fampiharana ho an'ny fahasalamana
3 Mamatra ny adin-tsaina mba hahafantarana ny tahan'ny fo sy ny saturation oxygen ihany koa
Fampiharana ara-pahasalamana mba hahafantaranao ireo gadona isan'andro
Androany ny smartphone sy PC dia misy ampahany amin'ny fiainantsika ary saika tereny izahay hipetraka na hijoro Amin'ny toerana iray. Tsy miabo amin'ny fahasalamantsika velively izany, koa ireo marika lehibe dia manandrana mandrisika antsika hanao spaoro, handeha hitsangatsangana na hisakafo ara-dalàna.
Ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'izy ireo dia Samsung Health izay tonga ankehitriny amin'ny kinova 6.0 (Azonao atao ny misintona ny APK amin'ny faran'ny lahatsoratra). Izy io dia rindrambaiko natokana ho an'ny telefaona Android, izay efa avy amin'ny widget-ny, izay ahafahantsika mahafantatra ireo dingana noraisina tamin'ny fotoana rehetra ary manome fidirana mivantana handrefesana ny tahan'ny fo, mandrisika antsika hanome lanja bebe kokoa ny toe-batantsika.
Ity widget ity koa dia manokatra ny làlana mankany amin'ny fampiharana nohavaozina izay manambara ny tenany ho mpankafy minimalism sy Design Material. Ho hitantsika ny mpanara-maso ireo dingana natao nandritra ny andro miaraka amin'ny tanjona, ary bara misy sary izay mampiseho, amin'ny fomba tsara, ny dice amin'ny ora farany. Manana ny tantara ihany koa isika ka amin'ny gazety hafa dia fantatsika hoe ohatrinona ny dingana nataontsika tamin'ny andro farany.
Samsung Health no fampiharana ho an'ny fahasalamana
Raha mankany amin'ny efijery an-trano na an'ny efijery lehibe an'ny Samsung Health isika, dia hitantsika fa amin'ity fanavaozana ity dia miseho ny boribory iray ho toy ny kisarisary izay manondro maso ny isan-jaton'ny dingana nataontsika sy ny sisa tavela hataontsika. taty aoriana mandalo andiana karatra Google Now izy ireo izay manondro hetsika hafa ary koa antony manosika isan-karazany, toy ny firaketana fanatanjahan-tena mba hanamafisana orina ny vatantsika.
Ireo karatra rehetra ireo, rehefa mifamezivezy any an-trano izahay, tonga am-panahy izy ireo mba hanolotra traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa. Ny karatra toy ny fanatanjahan-tena, sakafo, fotoana torimaso, lanja, tahan'ny fo, fihenjanana, rano sy fihenan'ny ôksizena dia singa rehetra ilaina amin'ny fahasalamana mba handraketana ny hetsika ataontsika ary avy eo afaka mampiseho antsika sary isan'andro, isan-kerinandro na isam-bolana.
Mamatra ny adin-tsaina mba hahafantarana ny tahan'ny fo sy ny saturation oxygen ihany koa
Voaresaka momba ny adin-tsaina, ankehitriny, amin'ny Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9 na Galaxy Note 9, azonao refesina izany. Ary tsy izany ihany, fa miaraka amin'ity fitsapana ity koa ho fantatrao ny saturation oxygen ary fitepon'ny fony. Izany hoe, vono telo no hovonoinao amin'ny vato iray.
Ireo fandrefesana ireo dia manana ny tantarany manokana a andiana bara izay misy ifandraisany amin'ny toe-pihetseham-po taiza ianao. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny fisotroana maro loko izay manondro haingana ny salan'isa isan'andro. Raha ara-maso dia mahafaly izao ny mandany mijery ny statistika tsirairay raisin'ny Samsung Health.
Toy izany koa ny takelaka fanamby, nalamina tsara tamin'ny andiana fanoharana ary sary masina, toy ny voatabia ho an'ny fanamby voatabia manerantany, na Discovery, tabilao iray hafa ahafahana misakafo miaraka amin'ireo olona an-jatony maro eran-tany izay mampiasa Samsung Health.
Fampiharana iray izay manome bebe kokoa ny tenany raha ampiarahintsika amin'ny gadget Samsung toa ilay voalaza etsy ambony izy, ary amin'ny fanavaozana ny kinova 6.0, Sefa lasa lavitra ny fahasalamana amsung mba hahafahanao mihevitra ny fahasalamanao ho zava-dehibe kokoa ary miaraka amin'izay dia mihaona amin'ilay traikefa be mpampiasa omena anao.
Sintomy ny APK an'ny Samsung Health
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ity no kinova vaovao an'ny Samsung Health: interface vaovao ary mandrefy ny haavon'ny fihenjanana ankehitriny
Ny fampiharana Samsung Healt dia azo ampiasaina amin'ny terminal rehetra, manana Leagoo Kiicaa MX aho. Atte.
Nanavao ny fampahalalana, misaotra Pedro 🙂
Ny Google Pixel mora vidy dia hanomboka any India